राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेको टोखा पर्यटकिय स्थल बन्दै « Bagmati Page
राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेको टोखा पर्यटकिय स्थल बन्दै
काठमाडौं । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेको टोखा नगरपालिकालाई पर्यटकिय गन्तव्य बनाईने भएको छ । विभिन्न मठमन्दिर, झर्ना तथा हरियालीले भरिएको टोखा-१ लाई नगर भित्रकै पर्यटकिय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य रहेको वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए ।
विगत देखि नै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु हिउद तथा वर्षाको समयमा समेत टोखाको झोरमा आउने गरेका छन् । वडाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘बौडेश्वर र जलेश्वर झर्नाको पहिचान गर्न समेत हामी टोखा-१ लाई पर्यटकिय गन्तव्य बनाउन लागि परेका छौं ।’
बौडेश्वर गुरुयोजनाको काममा तीव्रता
वडा नं. १ स्थित धार्मिक पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको स्थान हो बौडेश्वर गुरुयोजना । आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी बौडेश्वर गुरुयोजना अन्तर्गत पिकनिक स्पोट, चिल्डे्रन पार्क र पिकनिक स्पोटबाट मन्दिर सम्म झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिने योजना रहेको छ । जसमा चिल्ड्रेन पार्कको कामले पुणर्ता पाईसकेको बताउँदै वडाध्यक्ष अधिकारीले भने पिकनिक स्पोर्टको काम केही दिनबाटै शुरु हुन लागेको छ । स्पोर्टको काम सम्पन्न भएपछि मात्र पुल निर्माणको कामलाई अगाडी बढाईने भएको हो ।
करिव १० किलोमिटर पदमार्गको परिकल्पना गरिएकोमा हाल चाण्डेश्वरीबाट फूलबारी सम्म प्रारम्भिक काम शुरु भएको छ । पदमार्ग टोखा-२ चण्डेश्वरी फुलबारी-महाकाँल देवीथानबाट बौडेश्वर मन्दिर हुँदै तारकेश्वर तथा वडा नं. २ को शान्ति धामसम्म पुर्याईने छ । यस पर्यटकिय पदमार्गले स्वदेशि तथा विदेशि पर्यटक भित्र्याउने र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास रहेको छ ।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार पर्यटक भित्र्याउन पदमार्ग व्यवस्थित रुपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने, बौडेश्वर गुरुयोजना पुरा गर्ने, बारै महिना पानीको समस्या नहुने भएका कारण जलेश्वर गुरुयोजनामा बौद्ध धर्मालम्विहरुको ठुलो गुम्बा बनाउने तथा प्रचार प्रसार गर्ने योजना छ । टोखामा घुम्न जाँदा राष्ट्रिय निकुञ्जको समेत अवलोकन गर्न पाईने हुँदा यसले थप सहयोग पुर्याउने विश्वास रहेको छ ।
सामाखुसीबाट ७ किलोमिटर उत्तर शिवपुरीको काखमा अवस्थित झोर माहांकाल गाविस हाल टोखा-१ हो । अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, झोर जान टोखा-छहरे जाने मूल सडकबाट त्यहासम्म पुग्न सकिन्छ भने हाल टोखाकाे झोर जान यातायातको राम्रो पहुच रहेको छ ।